Shangke ဓာတုပစ္စည်းသည် Nootropics နှင့် Anti-Aging Supplements များကြောင့် Pterostilbene အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်
Potostilbene အမှုန့်သည် Nootropics နှင့် Anti-Aging Supplements များဖြစ်သည်
1. Pterostilbene ကဘာလဲ?
Pterostilbene သည်အချို့သောအပင်များ၏သက်တမ်းအတွင်းရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်သဘာဝကျကျထုတ်လုပ်ထားသောအရေးပါသောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည် resveratrol ဟုလူသိများသောအခြားဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုနှင့်ဆင်တူပြီးဖြည့်စွက်ပုံစံဖြင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ Pterostilbene ဖြည့်စွက်ဆေးများအလွန်အမင်း bioavailable ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအလွယ်တကူအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးအစာခြေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခြင်းမရှိပေ။ Pterostilbene အမှုန့်သည်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်မိနစ် ၁၀၀ အောက်ဖြစ်သည့်အတွက်၎င်း၏သက်တမ်းဝက်သည်အလွန်တိုတောင်းသည်။
Pterostilbene သစ်သီးဖျော်ရည်၊ စပျစ်သီးအရွက်၊ အိန္ဒိယကီနိုပင်သစ်ပင်အခေါက်၊ စန္ဒကူးနီနှင့်ကိုကိုးများပါဝင်သည်။ ဘလူးဘယ်ရီသည် Pterostilbene အမြင့်ဆုံးအစားအစာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် blueberries ပါ ၀ င်သည့်ပမာဏသည် Pterostilbene ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သေးငယ်သည်။ Pterostilbene blueberries ပါဝင်မှုသည် blueberries ၏ဂရမ်တိုင်းတွင် ၉၉ မှ ၅၂ nanograms ခန့်ဖြစ်သည်။
2.အရေးယူမှု၏ Pterostilbene ယန္တရား
အရေးယူမှု၏ Pterostilbene ယန္တရား resveratrol ၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ Pterostilbene ဒြပ်ပေါင်းသည်အစွမ်းထက်ဆုံး stilbene ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော Pterostilbene အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများအဖြစ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ချက်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားယန္တရားနှင့်ကိုက်ညီ။ trans-pterostilbene ၏ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွင် antineoplastic, antioxidant နှင့် inflammatory anti -oplastic ပါဝင်သည်။
Pterostilbene သည် resveratrol ထက် ၁၀ ဆပိုမိုထိရောက်သောထိရောက်သောဖန်းဂတ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပြသည်။ Pterostilbene ဒြပ်ပေါင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းပြသသည်။ ရောဂါပိုးများမှအပင်များကိုကာကွယ်ခြင်းသည် Pterostilbene အပါအဝင် stilbenes ၏အရေးပါသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းလှုပ်ရှားမှုများသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။
Pterostilbene သည်မော်လီကျူးဆိုင်ရာယန္တရားများစွာမှတစ်ဆင့်ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုတေသနတွင် Pterostilbene လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်အကျိတ်နှိမ်နင်းရေးဗီဇများ၊ signal transduction လမ်းကြောင်းများ၊ oncogenes၊ ဆဲလ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဗီဇများနှင့်ဆဲလ်သံသရာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းမျိုးဗီဇများပါဝင်သည်။
Pterostilbene ၏ antioxidative ဂုဏ်သတ္တိများ resveratrol နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ resveratrol တွင်၊ hydroxyl အုပ်စုသုံးစုသည်သီးခြား lymphoblasts နှင့်သွေးတမျိုးတည်းရှိ ROS (ဓာတ်ပြုခြင်းအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်များ) ကို neutralize လုပ်ပေးသည်။ antioxidation ဂုဏ်သတ္တိများကိုဒေသခံများကနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွင်းတစ်သျှူးပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော extracellular ဓာတ်ပြုခြင်းအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်များကိုပစ်မှတ်ထားရန် Pterostilbene အမှုန့်များအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ pterostilbene ယန္တရားများ၊
အရေးယူမှု၏ Pterostilbene ယန္တရား; Sirtuin Activation
Pterostilbene သည်ဆဲလ်များအတွင်း SIRT1 အချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး၎င်းကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် p53 ဖော်ပြမှုကိုတိုးစေသည်။ P53 သည်ပရိုတင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး DNA ကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးဆဲလ်များကိုကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောဗီဇပြောင်းလဲခြင်းမှကာကွယ်သည်။
လေ့လာမှုများစွာအရ pterostilbene ဓာတုဒြပ်ပေါင်းသည် TNF-alpha (အကျိတ် necrosis factor-alpha) မှထိန်းချုပ်သောရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; Pterostilbene သည်ဓာတ်ပြုခြင်းအောက်စီဂျင်အမျိုးအစားများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် interleukin-1b နှင့် TNF-alpha တို့ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။
ဤဒြပ်ပေါင်းသည် ER (endoplasmic reticulum) ဟုလူသိများသည့်ဆယ်လူလာစက်ယန္တရား၏အစိတ်အပိုင်းအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ သုတေသနတစ်ခုအရသွေးကြောဆဲလ်များ၏နံရံသည် Pterostilbene အမှုန့်နှင့်ထိတွေ့သောအခါသူတို့၏နံရံသည်ရောင်ရမ်းခြင်းအချက်များကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသဖြင့်ရောင်ရမ်းပုံမပေါ်ပါ။
အရေးယူမှု၏ Pterostilbene ယန္တရား; ကင်ဆာရောဂါဆန့်ကျင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အံ့ ingly စရာကောင်းတာက ER (endoplasmic reticulum) သွေးကြောတွေရဲ့ဖိအားကိုလျှော့ချပေးပေမဲ့ Pterostilbene ဟာလည်ချောင်းကင်ဆာဆဲ (လ်) တွေရဲ့ endoplasmic reticulum မှာစိတ်ဖိစီးမှုတိုးပွားစေတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကင်ဆာဆဲလ်များကို ရွေးချယ်၍ ပျက်စီးစေပြီးကျန်းမာသောဆဲလ်များရှိ oxidative stress ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ကျောရိုးသို့မဟုတ် ဦး နှောက်ဆဲလ်များ (glioma) ကင်ဆာဆဲလ်များတွင် Pterostilbene Bcl-2 ကိုလျော့နည်းစေပြီး Bax ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများကကျောရိုးသို့မဟုတ် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုသေစေသည့်ဆဲလ်များ၏“ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှု” အချက်ပြမှုကိုတိုးစေသည်။
ကင်ဆာဆဲ (လ်) များသည် Notch-1 ဟုလူသိများသောလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြု၍ oxaliplatin နှင့် fluorouracil အပါအ ၀ င်ဓာတုကုထုံးဆေးများ၏လုပ်ဆောင်မှုမှကာကွယ်ရန်။ Pterostilbene သည် Notch-1 အချက်ပြမှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်ဓါတုဆေးသွင်းကုသခြင်းဖြင့်ကုသမှုကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်စေသည်။
Pterostilbene သည် MUC1၊ b-catenin, Sox2, NF-κBနှင့် CD133 တို့အပါအ ၀ င်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်စေသည့်ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေါင်းစပ်ပါကရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးကင်ဆာဆဲ (လ်) များ၏ကြီးထွားမှုအတွက်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။
Pterostilbene သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ hippocampus ဒေသကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤတွင်၎င်းသည် CREB (cAMP response element-binding protein)၊ BDNF (ဦး နှောက်မှထုတ်လုပ်သော neurotrophic အချက်) နှင့် MAPK (mitogen-activated protein kinases) တို့ကိုမြှင့်တင်သည်။
ပရိုတိန်း (၃) ခုသည်အာရုံခံဆဲလ်များကိုပွားများရန်၊ ကြီးထွားရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိရောက်စွာတုန့်ပြန်ရန်ကူညီသည်။ SNRI စိတ်ကျဆေးများသည်ဤလမ်းကြောင်းများကိုလည်းပစ်မှတ်ထားသည်။
Pterostilbene သည် Hippocampus တွင် Nrf2 ဟုလူသိများသည့်ပရိုတင်းတစ်ခုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်၊ အလှည့်တွင် antioxidant protein များထုတ်ဖော်ပြသသည်။
Pterostilbene သည် ဦး နှောက်အား beta-amyloid (Aβ) မှကာကွယ်ပေးသောကြောင့် Alzheimer ရောဂါကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အာရုံခံဆဲလ်ကြီးထွားမှု၊ မှတ်ဥာဏ်နှင့်သင်ယူမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ပရိုတိန်းနှစ်ခုဖြစ်သော Akt နှင့် PI3K တို့ပါဝင်သည်။
3. Pterostilbene အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများ
အောက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်သုံးခုသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် pterostilbene အမှုန့် အကျိုးခံစားခွင့်များ၊
i. အဖြစ် Pterostilbene nootropics
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှအတွေးအခေါ်ပုံစံအသစ်များသည် ပိုမို၍ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပြီးမှတ်ဥာဏ်များကိုရယူရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ ပုံမှန်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည်လည်းလျော့နည်းသွားသည်။ Pterostilbene ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုပြန်လည်နုပျိုသောအာရုံကြောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီနိုင်သည်။
Pterostilbene သည်အားကြီးသော nootropic ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စိတ်ကိုအပန်းဖြေရန်နှင့်သိမှတ်မှုတိုးမြှင့်စေရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်သွေးကြောများသို့သွေးပြန်ကြောများတွင်ကူညီရန်စွမ်းရည်ရှိသောကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြားနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အားမြှင့်ပေးသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အလားတူသက်ရောက်မှုများကိုပေးသည်။
Pterostilbene nootropic အကျိုးကျေးဇူးများသည် dopamine ပမာဏတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်း၏ရလဒ်အဖြစ်ယုံကြည်ရသည်။ ကြွက်များတွင်, Pterostilbene စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကြွက်နှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနတစ်ခုတွင် pterostilbene ဖြည့်စွက်ဆေးများက dopamine ပမာဏနှင့်သိသိသာသာကိုမြင့်တက်စေခြင်းတို့ကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Pterostilbene ကိုကြွက်များ၏ ဦး နှောက် hippocampus တွင်ရရှိနိုင်သောအခါသူတို့၏မှတ်ဉာဏ်သည်တိုးလာသည်။
ကြွက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ Pterostilbene သည် hippocampus တွင်ဆဲလ်အသစ်များတိုးတက်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကြွက်ငယ်များ၏ ဦး နှောက်မှထုတ်ယူထားသောပင်မဆဲလ်များသည် Pterostilbene နှင့်ထိတွေ့သောအခါလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။
ဆဲလ်လေ့လာမှုများအရ pterostilbene အမှုန့်သည် MAO-B (monoamine oxidase B) ကိုပိတ်ဆို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်တွင် dopamine တိုးပွားစေသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသသည့်ဆေးများနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည် rasagiline, safinamide နှင့် selegiline ။ သုတေသနတစ်ခုအရ Pterostilbene သည်အာရုံခံဆဲလ်များကိုအေဒီ (အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ) နှင့်ဆက်စပ်သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
Pterostilbene စိုးရိမ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောစွမ်းရည်သည် monoamine oxidase ခကိုပိတ်ဆို့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Pterostilbene သည် anxiolytic လုပ်ဆောင်မှုကို ၂ နှင့် ၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ထိုးသည်။ ဒြပ်ပေါင်း၏ဤ anxiolytic လှုပ်ရှားမှု EPM အတွက်တ ဦး တည်းနှင့်နှစ်ခုမီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မှာ diazepam ၏ဆင်တူခဲ့သည်။
ii ။ Pterostilbene နှင့် အဝလွန်ခြင်း
Pterostilbene သည်အဝလွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုအရ pterostilbene ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိခြင်းတို့အကြားကြီးမားသောဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက Pterostilbene အမှုန့်သည် lipogenesis ကိုလျှော့ချရန်အလားအလာရှိသောအဆီအလေးချိန်ပမာဏကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ Lipogenesis သည်အဆီဆဲလ်ပိုလျှံမှုကိုဖန်တီးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ Pterostilbene လည်း အသည်းအတွက်အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အဆီဓာတ်တိုးခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်
မြင့်မားသောကိုလက်စထရောနှင့်အတူလူလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်။ သုတေသနပြုခုနှစ်တွင်, လက်စထရောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမယူကြသူသင်တန်းသားများကို pterostilbene ဖြည့်စွက်ယူနေစဉ်အချို့သောကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤရလဒ်သည်သုတေသီများကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသုတေသနသည် pterostilbene ဖြည့်စွက်အလေးအားကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေသောအထောက်အကူအဖြစ်တိုင်းတာရန်မရည်ရွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဆဲလ်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရ pterostilbene ဒြပ်ပေါင်းသည်အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Pterostilbene လုပ်ဆောင်သည်က၎င်းသည်သကြားများဆီသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ၎င်းသည်အဆီဆဲလ်များကိုကြီးထွားခြင်းနှင့်ပွားများခြင်းများကိုတားဆီးသည်။
Pterostilbene နှင့်တိုက်ကျွေးသောကြွက်များတွင်ပိုမိုကျန်းမာသောအူသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် Akkermansia muciniphila တွင်များစွာတိုးတက်မှုများရှိသည်။ A. muciniphila သည်ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးအဆင့်နိမ့်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါတို့ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ဤသည်ဘက်တီးရီးယားသည်မကြာသေးမီက probiotic သုတေသန၏အဓိကအာရုံစိုက်ဖြစ်လာသည်။
iii ။ Pterostilbene အသက်ရှည်မြှင့်တင်
Pterostilbene အိုမင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို Trans-pterostilbene ဟုခေါ်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤဓာတုပစ္စည်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ In vivo နှင့် in vitro လေ့လာမှုများသည် Pterostilbene ၏ကာကွယ်မှုနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းဓာတုသည်ကယ်လိုရီအကန့်အသတ်ရှိသည့်အတုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဓာတုဗေဒပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုရောဂါများကိုကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ဤအိုမင်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဖြည့်စွက်ဆေးသည်လူသိများပြီးသက်တမ်းတိုးသည်။ ကြွက်များတွင်ဤဓာတုဓာတ်ပါဝင်မှုနိမ့်ကျခြင်းသည်အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချပေးသည်။ လေ့လာမှုတွင် pterostilbene အစားအစာအရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးခြင်းကိုဘလူးဘယ်ရီကဲ့သို့သောစားသုံးခြင်းသည်စိတ်ရောဂါနှင့်ကင်ဆာအပါအ ၀ င်အိုမင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျန်းမာရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
4. Pterostilbene နှင့် resveratrol
Pterostilbene နှင့် resveratrol နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းသံသယမရှိပါ။ Resveratrol ကိုအနီရောင်ဝိုင်နှင့်စပျစ်သီးများတွင်ဇီဝသက်ရှိသတ္တုအဖြစ်လူသိများသည်။
Resveratrol ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများသည် Pterostilbene နှင့်ဆင်တူသည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ စွမ်းအင်ခံနိုင်ရည်တိုးမြှင့်မှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများ၊ ဆီးချိုရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအလားအလာနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုကာကွယ်သည်။
Pterostilbene သည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအားဖြင့် resveratrol နှင့်ဆင်တူသော်လည်း Pterostilbene သည်အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင် resveratrol ထက်ပိုမိုအားကောင်းနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုများကဖော်ပြခဲ့သည်။ Pterostilbene သည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဂလူးကို့စ်အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်ပိုမိုအလားအလာရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Pterostilbene ဝက်ဘဝသည် resveratrol ၏ထက် ၀ က်သက်တမ်းတိုသည်။ Pterostilbene သည်အမှန်တကယ် resveratrol ထက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့အစာခြေစနစ်မှစုပ်ယူရန်လေးဆမြန်သည်။ သီအိုရီအရ၎င်းသည် Pterostilbene ကို resveratrol ထက်အကြိမ်များစွာပိုမိုထိရောက်စေသည်။ သို့သော်ဤအချက်ကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ပိုမိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Pterostilbene နှင့် resveratrol ကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံဆေးတောင့်ပုံစံဖြင့်ပေါင်းစပ်ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ပေါင်းစပ်ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ပို၍ အစွမ်းထက်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
5. Pterostilbene ဖြည့်စွက်
Pterostilbene ၏နှစ်လိုဖွယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန်၎င်းကိုအမှုန့်ဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ Pterostilbene ဖြည့်စွက် အမျိုးမျိုးသောသဘာဝအစားအစာစတိုးဆိုင်များနှင့်အစားအစာဖြည့်စွက်အထူးပြုအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေနေကြသည်။ သင် pterostilbene ထုတ်လုပ်သူများကိုလည်းအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
Pterostilbene ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုများစွာသောဆေးများနှင့်အတူဆေးတောင့်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သင်တံဆိပ်သို့မဟုတ်တံဆိပ်ကိုသေချာစွာဖတ်ပြီး၎င်းကိုမဝယ်ယူမီဆေးတောင့်တစ်ခုစီ၌ Pterostilbene ပမာဏကိုသတိပြုသင့်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသသောကြောင့်ဤသည်အရေးကြီးပါသည်။
ထို့အပြင်အချို့သော pterostilbene ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်လူသားများတွင်လေ့လာခဲ့ရာများထက်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ အသုံးများသောဆေးများသည်ဆေးတောင့်တိုင်း၌ 50 mg နှင့် 1,000 mg ကြားရှိသည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပေါင်းစပ်ဖြည့်စွက်ဆေးများလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးပေါင်းစပ်မှုမှာ Pterostilbene နှင့် resveratrol တို့ဖြစ်သည်။ Pterostilbene ကို curcumin၊ green tea၊ astragalus နှင့်အခြားသဘာဝဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၎င်းသည်ရှားပါးသော်လည်း Pterostilbene ပါ ၀ င်သည့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံများလည်းတွေ့နိုင်သည်။ သင့်အားအရေပြားကင်ဆာမှထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့် Pterostilbene ပမာဏကိုလေ့လာထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အပိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။
6. အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Peterostilbene အမှုန့်ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
မင်းကအရည်အသွေးမြင့် pterostilbene အမှုန့်ကိုရောင်းဖို့ရှာနေရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော pterostilbene ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Third-party ဓာတ်ခွဲခန်းမှအမြဲတမ်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးသောသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာရှနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအမှာစာများကိုအမြဲတမ်းပေးပို့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး pterostilbene အမှုန့်ကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုငါတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
Rimando လေး, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004) ။ “ Resveratrol, pterostilbene နှင့် piceatannol vaccinium berries ။ J ကို Agric စားနပ်ရိက္ခာ Chem ။ 52 (15): 4713-9 ။
ကြွက်များတွင်ပါးစပ်ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့် resveratrol နှင့်၎င်း၏ dimethylether analog ၏ pterostilbene တို့၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာပရိုဖိုင်း၏ Kapetanovic IM, Muzzio အမ်၊ Huang Z. , Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics ။ Chemother ။ Pharmacol ။ 2011; 68: 593-601 ။
စည်းမျဉ်း (EC) Nru 258/97 အညီအသစ်သောအစားအစာအဖြစ်ဒြပ် trans-resveratrol ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး။ EFSA ဂျာနယ်။ ဥရောပအစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအာဏာပိုင်၊ အစားအစာထုတ်ကုန်များ၊ အာဟာရနှင့်ဓာတ်မတည့် EFSA အဖွဲ့။ 14 (1): 4368
Becker က L, Carré V ကို, Poutaraud တစ် ဦး, Merdinoglu: D, Chaimbault P ကို ​​(2014) ။ "စပျစ်ပင်အရွက်ပေါ်တွင် resveratrol, pterostilbene နှင့် viniferins တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်နေရာအတွက် MALDI အစုလိုက်အပြုံလိုက် Spectrometry ပုံရိပ်" မော်လီကျူး။ 2013 (7): 10587-600 ။
လုပ်ဆောင်ချက်၏ 2.Pterostilbene ယန္တရား
4.Pterostilbene နှင့် resveratrol
6. အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Peterostilbene အမှုန့်ဘယ်မှာရှာရမလဲ